AQRISO Maxeey yihiin hubka casriga ah ee diyaaradaha looga soo dajiyay garoonka Muqdisho - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada AQRISO Maxeey yihiin hubka casriga ah ee diyaaradaha looga soo dajiyay garoonka...
AQRISO Maxeey yihiin hubka casriga ah ee diyaaradaha looga soo dajiyay garoonka Muqdisho
Hub ka kooban Bastoolado iyo qoryaha ay ku howlgalaan Ciidamadda Waddanka Qatar oo loogu deeqay Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa maanta soo dejiyey Magaaladda Muqdisho.
Laba diyaaradood oo midi hubkaas ta kalana ay waddo Fahad Yaasiin ayaa maanta soo gaaray Xamar, diyaaradda hubka siday ayaa soo caga dhigatay Garoonka Ciidanka Cirka oo ku dhow Adan Ade Air Port, ugu dambeynna hubkaas ayaa la geeyey keyd u gaar ah Taliye Fahad.
Intaas kadib Xukuumadda waqtigeedu sii dhammaanayo ayaa wada qorshe lagu soo celinayo Ciidankii lagu soo tababaray Eritrea intii ka hartay maadaama horay loo soo weriyey in dagaallo loo adeegsaday qaarkood ay ku dhinteen.
Hubkan oo maanta la keenay waxa uu qorsheynayaa Taliyaha NISA Fahad Yaasiin sidii loogu qeybin lahaa Ciidanka la keenayo iyo hubka u yaalla oo uu rabo in Doorashadda uu ku maamulo sida ay tilmaamayso xogta aan helay.
Xogtaan oo ah mid laga helay Saraakiil katirsan Sirdoonka Soomaaliya ayaa cabsida Dadka Muqdisho qabeen ay sii kordhineysaa in arbushaad Dhacdo iyo qul qulatooyin Doorashada ah.